Antom-pivelomana: mila havaozina sy iofanana ny asa tanana | NewsMada
Antom-pivelomana: mila havaozina sy iofanana ny asa tanana
Asongadin’ny minisitera misahana azy ny asa tanana eto Madagasikara. Misy fihariana 12 sy karazana asa 114 hita amin’izany eto Madagasikara, araka ny tatitra nataon’ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra, sy ny asa tanana (Mica). Anisan’ny asa tanana, ohatra, ny fanaovana biriky, vilany, kojakoja samihafa ao an-tokantrano efa mahazatra, sns. Samy ahitana ireo fihariana ireo ny miasa anatin’ny ara-dalàna sy tsy ara-dalàna. Ireo mpiara-miasa fantatra, mahatratra 460 000; ireo miasa tena, tombanana ho miisa roa tapitrisa ka amin’ireo rehetra ireo, 10 % ny vehivavy.
Ho fanohanana ny asa tanana anefa, betsaka ny mila fanavaozana sy fanofanana ka tokony hohamoraina ny fampindramam-bola ho azy ireo. Singa iray fanampiana ahafantarana azy ireo amin’ny antsipiriany ny fanomezana karatra maha mpanao asa tanana. Izay ihany koa ny hidirana amin’ny fanarahan-dalàna, ahafantarana ny tolotra sy ny tinady amin’ny tsena eto an-toerana, na koa ny any ivelany mitady ny asa tanana vita malagasy.
Manampy azy ireo ny Ivontoerana momba ny antontanisa (Instat). Avy amin’izany karatra izany ny ahafantarana ny isan’ny mpanao asa tanana, ny fihariana sy asa atao, ny fiofanana tokony hatao, ny toerana misy azy ireo. Sehatrasa mampivoatra ny asa tanana raha manaraka ny fepetra rehetra takina amin’izany ireo mitrandraka azy. Betsaka anefa ny manao izany ho asa fanampiny, tsy matihanina.